စွမ်းရည်:600~ 700kg / h
နောက်ဆုံးလုံးလေးများအရွယ်အစား:2~ ၈ မီလီမီတာ
ကျွဲနွားတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်သည်ပြုလုပ်ထားသော All-In-One တောင့်ပုံစံဖြစ်သည် တိရစ္ဆာန်များတောင့်စက်ကိုအစာကျွေး ကြီးစွာသောဖိအားကတဆင့်. ၎င်းသည်နွားများအတွက်သာမကအစားအစာဖြစ်သည်, နွားတွေ, သိုး၊, ဆိတ်သငယ်တို့သည်နို့နှင့်အမဲသားကိုစားရကြ၏. ၎င်းတွင်ပရိုတင်းပါဝင်သည်, သတ္တဝါများနှင့်အမဲသားနှင့်နို့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တိရိစ္ဆာန်များရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အသုံးဝင်သောအခြားအာဟာရများ.
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းနွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်, ရိုးရာအစာကျွေးခြင်းသည်အစားအစာလိုအပ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီတော့ပါ. လယ်သမားများသည်ရရန်လွယ်ကူသောအခြားအစာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေလိုကြသည်, သိုလှောင်ရန်လွယ်ကူသည်, တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အဟာရနှင့်လျော့နည်းကုန်ကျသည်. နည်းလမ်းမရှိ? တိရိစ္ဆာန်အစာကျွေးတောင့်ကိုကြိုးစားပါ. အစာတောင့်များသည်ရိုးရာအစာများထက်ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရပိုများသည်. အစာတောင့်အတွက်ကုန်ကြမ်းများသည်ရရန်အလွန်လွယ်ကူသောမြက်သို့မဟုတ်စပါးကျန်ရှိနေနိုင်သည်, ၎င်းသည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ဤအကြွင်းအကျန်များအတွက်အစိမ်းရောင်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်. အပြင်, အစာကျွေးလုံးလေးများအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောထွေးနေကြသည်, ဒါကြောင့်ကျွဲနွားတွေကိုစားနေကြတယ်, သူတို့ကအချို့သောအစာကျွေးခြင်းသို့မဟုတ်ပါဝင်ပစ္စည်း piddling နိုင်ပါတယ်. ဒါကအာဟာရမျှတမှုကိုသေချာစေသည်. ကြက်သားအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုလည်းသင်လုပ်နိုင်သည်, ဝက်, တိရစ္ဆာန်များ, အသီးသီးငါးသို့မဟုတ်အခြားတိရိစ္ဆာန်များ, သူတို့ကိုရောနှောနှင့်လုံးလေးများသို့သူတို့ကိုငါပါစေ, သင်၏ကြက်၊ ဘဲနှင့်တိရစ္ဆာန်အားလုံးအတွက်အစာတောင့်ကိုရနိုင်သည်.
ကျွဲနွားတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ကိုကိတ်မုန့်များမှပြင်ဆင်နိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောမြေပဲပျိုးပင်အဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးအကြွင်းအကျန်, မြက်ပင်, ပြောင်းဖူးကောက်ရိုး, ဂျုံကောက်ရိုး, ဘောဇဉ်, ဂျုံဖွဲနို့စသည်တို့, by- ထုတ်ကုန်ဂျုံမှုန့်ကြိတ်, စီရီရယ်, သကာရည်, နောက် ... ပြီးတော့.
တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဓိကလုပ်ငန်းများမှာဖြစ်သည်: ကုန်ကြမ်းပြင်ဆင်မှု, အဓိကနှိမ်နင်း, သကာရည်ရောစပ်, ကြိတ်ခွဲပြီး, လုံးလေးများနှင့်ထုပ်ပိုး(မလုပ်မနေရ)
★ကုန်ကြမ်းများနှင့်အရန်ပစ္စည်းများကို Silo များနှင့်တင့်ကားများထဲသို့ပထမဆုံးသွင်းပြီး၊. သူတို့ကထို့နောက်အဓိက crusher အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်. ကြေမွပစ္စည်းများကိုဆန်ခါဖြင့်ထပ်မံခွဲထုတ်သည်, ပြီးတော့ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစားနှင့်အညီဌဌင့်ကန်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့.
★ကုန်ကြမ်းများကိုအရောအနှောရောနှောခြင်းဖြင့်ရောနှောရသည်. ဒီဖြစ်စဉ်၌, အစာ၏အာဟာရတန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် fatty ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုပစ္စည်းများထဲသို့ထည့်သည်. ရောနှောခြင်းမှရရှိသောအစာသည်သကာရည်နှင့်ရောစပ်ထားသည်.
1. နိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အတူမြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့် output ကို: ၎င်း၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းကတဆင့်, စက်အညီအမျှကျွေးမွေး၏, နှင့်အနိမ့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူလုံးလေးများထုတ်ပေး
2. ၎င်းထုတ်လုပ်သည့်အတောင့်သည်ချောမွေ့။ ညီမျှသည်, ပိုကောင်းခိုင်မာသော.
3. မော်တာနှင့်အတူရွေ့လျား pelletizer စက်, အဘယ်သူမျှမအဆီပြန်အငွေ့သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှုဖန်တီးပေးပါတယ်.
4. ပိုမိုအားကောင်း။ တာရှည်ခံအပိုပစ္စည်းများ, ထိုကဲ့သို့သောကြိတ်စက်နှင့်သေမြင့်မားသောအဆင့်မြင့်ရှုပ်ထွေးသောအလွိုင်းသံမဏိဖြင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်.
6. ဤစီးရီးများသည်တိရိစ္ဆာန်အစာကျွေးသည့်အတောင့်ကြိတ်စက်သည် sawdust ကဲ့သို့ဇီဝလောင်စာအမှုန်များကိုဖိနှိပ်နိုင်သည်, ကောက်ရိုး, ဖွဲနှင့်အခြားအမှုန်.
စွမ်းရည်(ကီလိုဂရမ် / နာရီ)
မြန်နှုန်း(r / min)
Out Dimension (မီလီမီတာ)